विश्वकप खेल्न नपाएपछि अब नेपाली टीम ! « Surya Khabar
विश्वकप खेल्न नपाएपछि अब नेपाली टीम !
अशोज २९, २०७३
थाइल्याण्डकी चानिदा सुथिरुआङले २७ तथा नाताकान चान्तमले २३ रनको योगदान दिइन्। नेपालकी करुणा भण्डारीले चार तथा रुबिना बेलबासे र सीता राना मगरले समान दुईरदुई विकेट लिए ।
त्यसअघि ब्याटिङ गरेको नेपालकी नेरी थापाले ३२, इन्दु बर्माले २६, निर्मलाकुमारी शाहीले २०, ज्योती पाण्डेले १३ तथा रुबिना बेलबासेले १० रन जोडिन्। जितसँगै थाइल्यान्ड आठ अङ्कका साथ लिगको शीर्ष स्थानमा छ । चार खेल खेलेको नेपालको भने दुई खेलमा जित तथा दुई खेलमा हार बेहोर्दै चार अङ्क मात्र छ ।
यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक हङकङसँग र दोस्रो खेलमा थाइल्याण्डसँग पराजित भएको थियो। त्यसैगरी मङ्गलबार भएको तेस्रो खेलमा नेपालले चीनलाई पराजित गरेको थियो भने बिहीबार भएको चौथो खेलमा नेपालले हङकङलाई पराजित गरेको थियो । नेपालले अब चीनसँग खेल्न बाँकी छ।